यो प्रतिनिधि सभाले अब काम गर्न सक्दैन, अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ– रमेश लेखक [अन्तर्वार्ता]
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका कांग्रेसका केही नेताले निर्णय गर्ने समय अझै आइनसकेकाले 'पर्ख र हेर' नीति अपनाइरहेका छन् ।
कांग्रेस वृत्तमा अर्ली इलेक्सनको बारेमा पनि छलफल शुरू भएको छ ।
अहिलेको संसद् र सरकार दुवैले राम्रो काम गर्न नसकेको तर्क गर्दै रमेश लेखक लगायतका प्रभावशाली नेताहरूले कांग्रेसले अर्ली इलेक्सनको बाटो समात्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
लोकान्तरसँगको कुराकानीमा लेखकले संविधानको धारा/उपधारामा अल्झिएर देशको राजनीतिलाई अन्योलमा राख्न नहुने दृष्टिकोण राखे ।
प्रस्तुत छ, लेखकसँग लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई विस्थापित गरेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना कति छ ?
कांग्रेस अहिले निर्णायक शक्ति होइन । निर्णायक भूमिका जसपाको भयो । अब जसपाले के गर्छ भन्ने कुराको ठेगान छैन । न त माओवादी केन्द्रले के गर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता छ ।
माओवादीले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय पनि गरिसकेको छैन । सरकारबाट समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णयपछि नयाँ शुरू हुने भयो ।
कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । हामी निर्णायक छैनौं भनेर चुप बस्न मिल्छ र ?
राजनीतिक हिसाबले त कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले कांग्रेसले चाल्ने कदमले निर्णायक भूमिका खेल्छ । तर गणितको आधारमा कांग्रेस अझै निर्णायक शक्ति होइन । गणितले के भन्छ भने कांग्रेसको नेतृत्वमा त ५ वर्ष सरकार नबन्ने भन्छ । हामीलाई जनताले ५ वर्ष प्रतिपक्षमै बस भनेर भोट दिएका हुन् नि !
तर यदि सरकार फेरबदलकै कुरा गर्ने हो भने माओवादी केन्द्र र जसपा तयार हुनुपर्‍यो । माओवादी केन्द्र र जसपा तयार नभइकन कांग्रेसले म सरकार बनाउँछु भनेर अगाडि बढ्ने कुरा भएन ।
भोलि यदि सफल भएन भने कांग्रेसलाई फाइदा त हुँदैन । नेताको पनि र कार्यकर्ताको पनि अनावश्यक अपमान हुने हुन्छ ।
भावी सत्ता समीकरणमा कांग्रेसको प्राथमिकता के हो ?
हामीलाई ५ वर्षका लागि विपक्षमा बस्न भनेर जनताले मत दिएका हुन् । हामी विपक्षमै बस्ने हो । तर नयाँ सरकार बनाउनै सकिएन भने कांग्रेस अघि सर्नुपर्छ । अपोजिसन भनेको त वेटिङ गभर्मेन्ट हो नि ! संसद्ले नयाँ सरकार बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने क्लियर हुनुपर्‍यो नि ।
संसदमा ६४ प्रतिशत त एमाले र माओवादीको मत छ । अहिलेसम्म उनीहरू गठबन्धनमै छन् । उनीहरूले गठबन्धनकै सरकार चलाइरहेका बेला हामीले हाम्रो सरकार बनाउँछौं भन्ने कुरा त दूरगामी रूपले असफल हुने कुरा हो ।
पहिलो कुरा त माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्‍यो । बल्ल त्यसपछि कांग्रेसले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्छ ।
तपाईंहरूको पार्टीभित्र मतान्तर त देखियो, कांग्रेस स्पष्ट मार्गचित्रमा हिँडेको छैन नि ?
एउटा उदाहरण दिन्छु, हिजो पार्टीभित्र हामीले नेकपाको राजनीतिक र वैधानिक अवस्था स्पष्ट नहुँदासम्म कांग्रेसले कुनै पनि निर्णय गर्नुहुन्न भनेका थियौं ।
सरकारमा जाने, शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय अथवा कुनै पनि खालको निर्णय गर्नुहुन्न भनिएको थियो, किनभने नेकपाको राजनीतिक र वैधानिक हैसियत स्पष्ट छैन भनेका थियौं नि हामीले ! त्यतिबेला अन्य केही नेताहरूले माधव नेपाल र प्रचण्डजीसँग गएर मिलिहाल्नुपर्छ, माधव प्रचण्डसँग मिलेर सरकार बनाउनपर्छ, कि आफैं नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो ।
यदि त्यतिबेला हामीले हतार गरेर माधव र प्रचण्डसँग मिलेर सरकार बनाउने भनेको भए अहिले के हुने थियो ?
वैकल्पिक रूपमा शेरबहादुरजीको नाम दिएर अथवा प्रचण्डको नाम दिएर अविश्वासको प्रस्ताव राखेको भए कांग्रेसको अपमान हुन्थ्यो कि हुन्थेन ? त्यसकारण परिस्थिति परिपक्क नभइकन निर्णय गर्नु राम्रो हुँदैन ।
माधवकुमार नेपालहरू एमालेमै फर्किनु, ओली झन् शक्तिशाली देखिनुलाई कांग्रेसले कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ ?
अदालतको एउटा फैसलाले रातारात माधव नेपालहरू फर्किनु परेन त ? उहाँहरूलाई सांसद पदको मोह रहेछ । राजनीतिक हिसाबले उहाँहरू नजान सक्नुहुन्थ्यो, तर एमालेमै फर्किनुभयो । पदको लोभ त स्पष्ट देखियो ।
उहाँहरूसँग निर्णय गर्ने शक्ति त थियो । राजनीतिक अभियान चलाउने भए हामीले सांसद पद छोड्न तयार छौं भनेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो नि ! रातारात भाग्नुभयो । सांसदको पद यति महत्त्वपूर्ण लाग्यो कि उहाँहरूले राजनीतिक निर्णय गर्न सक्नुभएन ।
उहाँहरूमा टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरू जत्तिको हिम्मत पनि रहेनछ । अब उहाँहरूको भरोसामा लागेर कांग्रेस अगाडि बढेको भए के हुन्थ्यो हेर्नुस् त ?
भनेपछि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि माओवादी नै निर्णायक देख्नुभएको छ तपाईंले ?
आजको स्थिति भनेको पनि जबसम्म माओवादीले आफ्नो परिस्थिति प्रस्ट गर्दैन तबसम्म कांग्रेसले कुनै निर्णय गर्दैन ।
कांग्रेसका नेताहरूले 'अर्ली इलेक्सन'को कुरा गरिरहेका छन्, तपाईं पनि त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ । यसको पछाडि तपाईंहरूको लजिक के हो ?
मलाई देश अर्ली इलेक्सनमा जान्छ जस्तो लाग्छ । यो प्रतिनिधि सभाले काम नै गर्न सक्दैन नि ! ६४ प्रतिशत संख्या रहेको नेकपाले काम गर्न नसकेर त्रिशंकु संसदमा रुपान्तरित भयो ।
दुईतिहाइ भएको सरकारले गर्न नसकेको काम त्रिशंकु संसदले बनाउने सरकारले गर्न सक्छ ?
त्यसकारण यो प्रतिनिधि सभाले अब कुनै काम गर्न सक्दैन । लक्षण पनि देखिन थाल्यो । अब ताजा जनादेशको विकल्प छैन ।
तर संविधानत: अहिले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार छ । त्यसबाट उपधारा ३ मा जानुपर्‍यो, त्यसपछि ५ मा जानुपर्‍यो,बल्ल संसद् विघटन भएर अर्ली इलेक्सन हुने होला नि ? वैकल्पिक सरकारका यति धेरै प्रयास गर्नुपर्छ भनेर संविधानले भनेको अवस्थामा देश कसरी ताजा जनादेशमा जान सक्छ ?
मेरो दृष्टिकोण के हो भने कांग्रेस जस्तो पार्टीले संविधानका धारामा अल्झेर मुलुकलाई अन्योलमा पार्नुहुँदैन । नेपाली कांग्रेस भनेको 'लयर्स क्बल' होइन, यो राजनीतिक पार्टी हो ।
हाम्रो प्रयास सबै आउनुहोस् भन्ने छ, तर माधव नेपाल ध...
सत्ता सहकार्यबारे उपेन्द्रजीको आग्रह व्यक्तिगत हो, पार्...
धमिलो पानीमा माछा मार्दै
खन्ने खोलाले बगाएको बाँध र तटबन्धको अनुगमन
अफ्रिकामा ५१ लाख ३७ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा पहिरोले नदी थुनियो, तामाकोशी नदीको तटीय क्षेत्रमा खतरा